DRAG RACE ယူကေရာသီနှစ်မိဖုရားတွေ၊ သူတို့ဘယ်မှာလဲ။ - သတင်း
Beans, Vogue နှင့်စာအုပ်အရောင်းအ ၀ ယ် - Drag Race UK ဗိုလ်လုပွဲအပြီး၌မိဖုရားများပြုသမျှအရာအားလုံး
Drag Race UK နိဂုံးချုပ်အပြီးတစ်ပတ်ကျော်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာကဘုရင်မင်းမြတ်ဟာလောရင့်ချန်နီကိုဒုတိယရာသီရဲ့အနိုင်ရခဲ့ချိန်ကတည်းကတိတ်ဆိတ်စွာမနေခဲ့ပါဘူး။
အိပ်ရာထဲမှာလုပ်ဖို့ nastiest အမှုအရာ
အားလုံး Twitter နှင့် Instagram ကိုကျော်သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆင်နွှဲခြင်းနှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်အလုပ်လုပ်နေသောစီမံကိန်းအသစ်များကိုအကြောင်းကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြရတယ်, ငါကြည့်ရှုရန်သာ။
ပြပွဲပြီးဆုံးသွားသောအခါမိဖုရားများသည်စာအုပ်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၊ A'Whora သည်ပွဲပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တွင်ဖျော်ဖြေနေသည်၊ Bimini သည်စံပြဖြစ်နေပြီး Tayce သည် Heinz Baked Beans အတွက်ပံ့ပိုးပေးသောအကြောင်းအရာများပြုလုပ်နေသည်။
သူတို့အားလုံး Drag Race UK ခရီးစဉ်တွင်လာမည့်နှစ်တွင်မိဖုရားများအားလုံးပြန်လည်စုစည်းလိမ့်မည်။ ဒီခရီးစဉ်ဟာမူလကလေးဆယ့်လေးယောက်သာဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်ပရိသတ်တွေဆီကတုံ့ပြန်မှုတွေမရခဲ့ရင်မိဖုရားတွေအားလုံးကိုဒီခရီးစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
Drag Race UK မှဘုရင်မနှစ် ဦး သည်ပြပွဲပြီးဆုံးသည့်အချိန်အထိဤအရာများအားလုံးသည် -
Lawrence Chaney (@lawrencechaney) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးကဲသောဆုရှင် Lawrence Chaney သည်တစ်ကိုယ်တော်စီမံကိန်းများအကြောင်းကြေငြာရန်မရှိသေးသော်လည်းလာမည့်နှစ်တွင် Drag Race UK ခရီးစဉ်၌ပါ ၀ င်နေသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, လောရင့်စပြပွဲအနိုင်ရမှလာသောသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စီးရီးအတွက်သရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အတောအတွင်းသူမကလက်ရှိရုံပြပွဲအနိုင်ရပြီးကတည်းကသူမရရှိခဲ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်။ တွစ်တာနှင့် Instagraming ဖြစ်ပါတယ်။
Bimini (@biminibabes) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ပြပွဲအဆုံးသတ်ကတည်းက Bimini မှတက်မထားပါဘူးဘာမှရှိပါသလား ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသူတို့ဘဝကရန်ဆွဲဘုရင်မကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ခေါင်းစဉ်ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းကစာအုပ်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်ဟုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
စာအုပ်အရောင်းအ ၀ ယ်မလုံလောက်ပါက Bimini မှသူတို့ကြိုတင်ဘွတ်ကင်စာရင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Next Models မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ယနေ့တွစ်တာတွင်ကြေငြာချက်ပြုလုပ်ခြင်း Bimini ကဤသို့သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအိပ်မက်များထဲတွင်ဘယ်သောအခါမျှမစဉ်းစားမိပါ။ ဤအခွင့်အလမ်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကျားမမဟုတ်သောနှစ်သိမ့်မှုအတွက်အလွန်အရူးအမူးစွဲလမ်းစေသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအထူးကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းထက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အဓိကဘွတ်ကင်စာရင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့ကိုငါအဘို့ဤမျှလောက်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
Bimini သည်သူတို့၏ဇာတိမြို့ Norwich တွင်နံရံဆေးရေးပန်းချီကားနှင့်အတူဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ Norwich ဘောလုံးအသင်းမတ်မတ်၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံစံကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကတော့နံရံဆေးရေးပန်းချီကားသည်ကူးစက်ခြင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
သူတို့ဟာဒဏ္legာရီအလှကုန်အနုပညာရှင် Nikki Wolff ရဲ့လှပတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဖန်တီးထားတဲ့ Vogue.co.uk အတွက်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
⛓TAYCE⛓ (@itstayce) မျှဝေတဲ့ပို့စ်တစ်ခု
လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံး, Tayce, ပြပွဲ၏အဆုံးကတည်းကကရိုက်ချိုးခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Instagram တွင်သူတို့ Coca-Cola နှင့် wow အတွက်ကမကထပြုရေးသားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမကဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင်ရူးသွပ်နေသည်။ ရိုးရိုးသားသားလိုပဲရင်သပ်ရှုမောဖွယ်။
ထိုမျှမက - Tayce Heinz Baked Beans များအတွက်ကမကထဗီဒီယိုကိုပြုတော်မူပြီ။ ငါစွဲလမ်းနေပြီးငါးမိနစ်စာဗီဒီယိုကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြည့်နေတယ်။
Tayce သည်၎င်းတို့၏သရုပ်ဆောင်ပြissueနာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် King Kong မဂ္ဂဇင်းအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။ အိုးနဲ့ဒီတနင်္ဂနွေသူမသူမ၏ဆံပင်အနက်ရောင်ဆိုး။
Ellie Diamond မှတင်ပြသည် (@elliediamondofficial)
စတုတ္ထမြောက်ဗိုလ်လုပွဲ Ellie Diamond စီးရီးပတ်ရစ်ကတည်းကအများကြီးအထိဖြစ်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လာမည့်နှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်ဗြိတိန်ခရီးစဉ်အတွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်နှင့်ဤနွေရာသီဖြစ်ရပ်များအများအပြားမှာဖျော်ဖြေခံရဖို့သေချာပါသည်။
ခလုပ်, ကလစ်နှိပ်ပါ။ အိမ်လိုနေရာမျိုးတော့မရှိဘူး။ @awhoraofficial
ပန်းခြံထဲတွင်သန့်ရှင်းသော T! ⚡️
A'Whora | Bimini | လောရင့် | Tayce
AND များစွာသောအများကြီး! #HolyTinthepark https://t.co/s0TSs4ochs pic.twitter.com/OFDzGGclvS
- HOLY T (@Holy_TEurope) မတ်လ 26, 2021
Wow A'Whora သည် Drag Race ၏ဇာတ်သိမ်းပြီးကတည်းကများစွာသောအဖြစ်အပျက်များကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ ကျန်တဲ့မိဖုရားတွေလိုပဲသူမလာမယ့်နှစ်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးစဉ်မှာဗိုလ်လုပွဲကိုတက်ရောက်မှာပါ။
သို့သော်သူမတိုင်မီသူသည် UK ၌ Huns နှင့်အတူယခုနှစ်ခရီးစဉ်တွင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဗြိတိန်တွင်သာမကကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျတွင်လည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ A'Whora သည် The Park, Manchester နှင့် London Pride၊ Mighty Hoopla နှင့် Drag Fest ရှိ Holy T တွင်လည်းဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကြောင်းစာရင်းဖတ်နေကုန်တော့တယ်။
A'Whora သူမနှင့် Tayce အတူတကွခရီးစဉ်သွားလိမ့်မည်ဟုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပေမယ့်အဘယ်သူမျှမရက်စွဲများသေးကြေညာခဲ့သည်။
အကယ်၍ ၎င်းမလုံလောက်ပါက A'Whora သည်သူမ၏တွစ်တာတွင်တီရှပ်တစ်ခုတင်ပြီးနောက် Trans Lives အတွက်ပေါင် ၂၅၀၀ ကျော်မြှင့်ခဲ့သည်။
✨အစ်မညီအစ်မ @ (@officialsistersister) မျှဝေသော post တစ်ခု။
သူမသည်သူမ၏အထင်ကရအပြာရောင်နှုတ်ခမ်းနှင့်အတူ hoodie နှင့်ခေါင်းအုံးအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်ပေမယ့်။
Tia Kofi (@tiakofi) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Drag Race ကနေထွက်သွားပြီးကတည်းက Tia ဟာသူမရဲ့အသွင်အပြင်ကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်တယ်။ wow လိုပဲ။
Tia သည်ပန်းခြံရှိ Holy T တွင်ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ပြီး West End ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ ၁၇ ရက်တွင် Veronica Green နှင့်တစ်ကြိမ်အနိုင်ရသူ Vivienne တွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဂျိုးဘလက်ခ် (@misterjoeblack) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
အလွယ်တကူပြပွဲမှထွက်ခွာကတည်းကဂျိုးက Black မှဖြစ်ပျက်ရဲ့အရှိဆုံးအထင်ကရအရာ, သူမကဒါနအတွက် H&M စားဆင်ယင် * ကိုချွတ်လေလံတင်ရောင်းချကြောင်းသတင်းဖြစ်ပါတယ်။
Sussex Beacon အတွက်ငွေရှာဖို့အတွက်လူတွေဟာ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဖို့ ၀ တ်ဆင်နိုင်တဲ့လူတွေကို ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာစနေနေ့မှာဂျိုးကသူ့ရဲ့တွစ်တာမှာကြေငြာခဲ့တယ်။
ဂျိုးသည်စက်တင်ဘာလအတွက်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်ကိုလည်းကြေငြာခဲ့ပြီး The Park ရှိ Holy T တွင် Tia Kofi နှင့် UK Huns တို့နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သည်။
Veronica Green (@veronicaqween) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Veronica Green အတွက်အကြီးမားဆုံးသတင်းမှာသူမ Stictly Come Dancing ဂီတထုတ်လုပ်သူမှရေးသားထုတ်ဝေသော Stars ဟုခေါ်သောသူမ၏ပွဲ ဦး ထွက် single ကိုထုတ်လွှင့်သည့်ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်။
Veronica သည်မေလ ၁၇ ရက်တွင် Tia နှင့် The Vivienne သို့ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုယ်ပိုင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုလျှင်အိုးသူမလည်း Cameo တက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
Ginny Lemon မှ @ ginnylemon69 မှမျှဝေသည်။
Ginny Lemon ဟာ Drag Race ဇာတ်လမ်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အထင်ကရဇာတ်လမ်းတွဲကတည်းကသူတို့တွေအများကြီးမတက်ခဲ့ကြဘူး။ Ginny သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးစဉ်တွင်အခြားမိဖုရားများနှင့်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်ပြီးစီးရီး၏အကြီးမားဆုံးအခိုက်အတန့်များကိုဖြတ်သန်းရန် Gay Times သတင်းစာ၏အစီအစဉ်တစ်ခုတွင်လည်းပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
Ginny သည် Drag and Drive ပြပွဲများ၌နွေရာသီတွင်ရာသီတစ်ခုနှင့်မိဖုရားနှစ်ပါးနှင့်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သည်။
Asttina Mandella (@asttinamandella) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
Drag Race ဇာတ်သိမ်းအပြီးတွင် Asttina သည်သူမ၏မိခင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကြေကွဲစွာကြေငြာခဲ့သည်။
သူမ Instagram ကိုရေးခြင်းဖြင့်သူမယုံကြည်ချက်ကိုကျော်လွန်ပြီးချိုးဖောက်ခံခဲ့ရပြီးဒီကမ္ဘာမြေကိုလျှောက်လှမ်းဖို့အတွက်အားအပြင်းဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့အမေ Elizabeth Dawn Seaton ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သူမရေးသားခဲ့သည်: Dawn Elizabeth Seaton - ၁၉၆၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ရင်သွေးကင်ဆာကိုတွန်းလှန်ပြီးအပြင်းအထန်တိုက်လှန်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အစဉ်အဆက်စွမ်းအားအရှိဆုံးအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ကြယ်များနှင့်မိုamong်းကောင်းကင်အလယ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်မျှဝေခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Asttina ကလူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူမကဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်းကိုမျှဝေစဉ်ကတည်းကနိမ့်ကျနေပါတယ်။
- ချယ်ရီချစ်သူများနေ့ (@TheCValentine) မတ်လ 21, 2021
ချယ်ရီသည် UK Drag Race ခရီးစဉ်တွင်လည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်မန်ချက်စတာစီးတီးတွင်စကားပြောမည်ဖြစ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့်ပုံရိပ်ခရက်ဒစ် @veronicaqween , @biminibabes , @itstayce
• ကောင်းပြီကလေးများ? သင်သည်မည်သည့် Drag Race ယူကေရာသီတွင်မိဖုရားနှစ်ပါးဖြစ်နေသည်ကိုရှာဖွေရန်အချိန်ရောက်ပြီ
• သင် Drag Race UK မိဖုရားများကိုလွမ်းဆွတ်နေပါက၎င်းတို့သည် TikTok တွင်ရှိနေသည်
• နေဆဲမပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်ရဲ့ Drag Race ဇာတ်လမ်းတွဲကျော်? ဤအ 33 ဇာတျသိမျး memes နှင့်အတူပြန်လည်ထူထောင်